News in Photos | MOEMAKA (stop) PRESS !!!
Category Archives: News in Photos
ယမန်နေ့က သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ စိမ်းရောင်စို၏ ၁၅ ကြိမ်မြောက်သစ်ပင်စိုက်ပွဲကို မန္တလေးတိုင်း ဝက်လက်မြို့နယ် ရှိန်းမကားရွာ ဘေးမဲ့တောကြီးအနီးက တောရကျောင်းကြီးတွင် ပြုလုပ်ရာ ရန်ကုန် မုံရွာ ရွှေဘို ပြင်ဦးလွင် မြစ်ကြီးနားမြို့များမှ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့များ ၊ ဧရာဝတီချစ်သူများစွာ ပူးပေါင်း ပါဝင် ဆင်နွှဲကြသည်။ Read the rest of this entry »
Posted by oothandar on September 12, 2011 in News in Photos
“21st century latest jewelry show” in Burma
စနေနေ့က ရန်ကုန် ဆီဒိုးနားဟိုတယ်တွင် ပြုလုပ်သော “21st century latest jewelry show” ကျောက်မျက်ဖက်ရှင်ပြပွဲတွင် မြန်မာဒီဇိုင်းပညာရှင်တို့၏ ဖန်တီးမှုများကို တွေ့ရသည် (ဓာတ်ပုံများ – AP)
American marked 9/11 10 year moment
နိုင်းအလဲဗင်း – အမေရိကန်ပြည် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရခြင်း ၁၀ နှစ်ပြည့်
ဓာတ်ပုံသတင်း၊ စက်တင်ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၁ (Day Life Photo)
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀နှစ် – ၂၀၀၁၊ စက်တင်ဘာ ၁၁ က အမေရိကန်ပြည် နယူးယောက်၊ ၀ါရှင်တန်တို့မှာရှိတဲ့ အစုိုးရအဆောက်အအုံနဲ့ ကုန်သွယ်ရေးအဆောက်အအုံတို့ကို အာဖဂန္နစ္စတန်အခြေစိုက် အိုစမာဘင်လာဒင် ခေါင်းဆောင်တဲ့ အယ်လ်ကိုင်းဒါ ဘာသာရေးအစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့က အမေရိကန်လူစီးလေယာဉ်တွေကို အပုိုင်စီးပြီး တိုက်ခိုက်ဖျက်စီးခဲ့ကြတယ်။ Read the rest of this entry »
Posted by oothandar on September 11, 2011 in News in Photos
Daw Suu visits Min Ko Naing’s family
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ယနေ့ နေ့လယ် ၁၂း၁၅ မှ ၁း၃၀ အထိ မင်းကိုနိုင်၏ နေအိမ်သို့ သွားရောက်ကာ မိသားစုဝင်များနှင့် တွေ့ဆုံပြီး အားပေးစကားများ ပြောကြားခဲ့သည်။ Read the rest of this entry »
ISTAF International Sepak takraw Super Series in Bangkok
မြန်မာအသင်း ပါဝင်သည့် နိုင်ငံတကာ အမျိုးသမီး ပိုက်ကျော်ခြင်းပြိုင်ပွဲ
ကြာသပတေးနေ့က ဘန်ကောက်တွင် မြန်မာအသင်း အင်္ကျီစိမ်း နှင့် အင်ဒိုနီးရှားအသင်း အင်္ကျီနီတို့ ဘန်ကောက်မြို့ ISTAF နိုင်ငံတကာ ပိုက်ကျော်ခြင်း ပြိုင်ပွဲ တွင် ယှဉ်ပြိုင်နေပုံ
မြန်မာအသင်းက ၃ ပွဲ ၁ ပွဲဖြင့် အနိုင်ရသွားကြောင်း http://www.sepaktakraw.org/ တွင် တွေ့ရသည်။
Posted by oothandar on September 9, 2011 in News in Photos
free burma vj!
သတင်းသမား၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေကို လွှတ်ပါ
မြန်မာနိုင်ငံ အကျဉ်းထောင် အသီးသီးရှိ ရုပ်သံသတင်းသမား ၁၇ ဦး နှင့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေး ဆန္ဒပြပွဲကို ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ မြန်မာသံရုံးရှေ့တွင် ယနေ့ ပြုလုပ်နေပုံများ ဖြစ်သည်။ Read the rest of this entry »